Isan’ireo nandray anjara tamin’ny tolona 29 Martsa 1947 tao Moramanga i Rakotomalala Raymond, araka ny fijoroana vavolombelona nataony. 17 taona izy tamin’izany ka mpitondra ody basy no andraikitra niantsorohany amin’ny mbola maha tovolahy tsy manam-bady azy araka ny fomba nifampifehezana tamin’izany.
Tao Moramanga no niadiany ary ny andian-tafika notarihin-dRazafindrabe Victorien sy Rabetrena no nisy azy.
Rakotomalala Victorien no tena anarana nomen’ny Ray aman-dreniny azy, fa noho io fitovizana anarana amin-dRazafindrabe Victorien io dia nosoloana Raymond ny fanampinan’anarany. Ao Beparasy no toerana nihaviany, tanàna tsy lavitra an’i Moramanga raha manaraka ny lalam-pirenena faha-2 hiazo an’Antananarivo.
Maty nitondra alahelo Rakotomalala Raymond. Ny fandaharana Zahantany tao amin’ny Televiziona Malagasy (TVM) no nahitana sy nandrenesana azy farany, ary tamin’izany no nanehoany ny hetaheta, faniriany, eny ny alahelony.
Efa nanaovany fangatahana tamin’ny fitondram-panjakana fa tsy mbola misy voavaly hatramin’izao na mba valibabena fotsiny, hoy izy ny hoe :
- Naninoa no nomena olona manokana ny toerana nisy ny Tranom-pokonolona ao Moramanga nefa toerana tena manan-tantara hampitaina amin’ny taranaka handimby ?
- Maninona raha mba anaran’ireo mpitaritolona niandohan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara no ampitondraina ny anaran’ny tobin’ny Zandarimariam-pirenena ao Moramanga, amin’izay mba velona mandrakariva amin’ny tantaram-pirenena ny anaran’ireo Mahery Fo sisa mba fantatra anarana ?
Tena nalahelo Rakotomalala Raymond raha nampahatsiahy fa efa nanaovany fangatahana tamin’ny fitondram-panjakana ny mba hikarakarana ny tranon-dRazafindrabe Victorien fa tsy nisy valin’izany hatramin’izao.
Fampanantenan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, tamin’ny kabariny 29 martsa 2017, hoy Rakotomalala Raymond, ny hanome bodofotsy firakotra ireo Bekotro maroholatra akanga sisa nanamborana fa tsy mbola azo izany mandraka ankehitrio, nodimandry ihany izy.
Miha tsy zarizary ny fikarakarana bekotro maroholatra tapaporohana sisa tsy may, mbola velona ka mitarika fahafatesana haingana amin’izy ireo. 172 izao no sisa fa efa maty avokoa. Tena izao tokoa ve hoy izy ny toerana sahaza anay 70 taona aty aoriana ? Banga iray io isa io taorian’ny nahafatesany. Nentiny mandra-maty ny alahelo.
Alahelony ny tsy isian'ny fikarakara ny Fasan'ny Mahery Fo ao Ampanihifana, izay toa fahazarana fotsiny sisa ny fanateram-boninkazo ao rehefa 29 martsa.